‘अनुहार बिगारेर क्यारिकेचर हुँदैन’ - संवाद - नेपाल
‘अनुहार बिगारेर क्यारिकेचर हुँदैन’
काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पेन्टिङमा स्नातक नवीन नाल्बो, २९, मूलत: पोट्रेट पेन्टिङ कोर्न मन पराउँछन् । नाल्बोले क्यारिकेचर विधामा समेत आफूलाई अब्बल साबित गरे, ३० र ३१ जेठमा सम्पन्न पहिलो क्यारिकेचर प्रतियोगिता जितेर । ‘नेपाली क्यारिकेचर– ०७४’ नाम दिइएको प्रतियोगितामा नाल्बोले बनाएको कलाकार मनुजबाबु मिश्रको क्यारिकेचर पहिलो भयो । यही सेरोफेरोमा नाल्बोसँग गरिएको कुराकानी :
क्यारिकेचर भनेको के रहेछ ?
ड्रइङ, पेन्टिङ, ग्राफिकका माध्यमबाट बनाइने चित्र । समाजमा नाम चलेका व्यक्तिहरूको ‘क्यारेक्टर’लाई बिगारेर प्रस्तुत गरिन्छ । जुन चीजबाट ऊ चिनिन्छ, त्यसलाई नै बिगारेर चिन्ने बनाइन्छ, क्यारिकेचरमा । राजनीतिक व्यक्ति, कलाकार, सेलिब्रिटी र नाम चलेका जोकोही यसका पात्र हुन्छन् ।
तपाईंले चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिभन्दा कलाकार कै क्यारिकेचर बढी बनाउनुभएको छ, किन ?
जसको ‘क्यारेक्टर’ आफूलाई थाहा छ, उसैको बनाउने हो । आफूले पेन्टिङ गर्ने पात्रको क्यारेक्टर जति बढी थाहा भयो, त्यति नै आफ्नो सिर्जनालाई धेरै तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । मैले कलाकारितामै लागेका व्यक्ति बढी चिनेकाले उनीहरूलाई छान्ने गरेको हुँ ।
‘कार्टुन’ र ‘क्यारेक्टर’ दुवैमा हास्य र व्यंग्य त हुन्छ तर फरकचाहिँ के हो ?
‘क्यारेक्टर’मा पात्रको हाउभाउ, अंगका आकारप्रकार बढाइचढाइ प्रस्तुत गरिन्छ । त्यो पेन्टिङ हेर्नासाथ दर्शकले फलानो भनेर चिन्छन् । तर, कार्टुनमा भने स्टोरी हुन्छ । कार्टुन व्यक्ति र घटनाकेन्द्रित दुवै हुन्छ । जबकि, क्यारिकेचर पात्रकेन्द्रित नै हुन्छ । बरू घटनाबाट पात्रले देखाउने हाउभाउचाहिँ क्यारिकेचरको विषय बन्न सक्छ । धेरै कुराचाहिँ यी दुईबीच मिल्छ ।
‘पोट्रेट पेन्टिङ’मा रुचि भएको व्यक्ति कसरी ‘क्यारेक्टर’तिर लागेर प्रतियोगिता नै जित्नुभयो ?
म पोट्रेट पेन्टिङ बढी गर्छु । पोट्रेट, क्यारेक्टर र कार्टुन यी तीनवटै ‘इलस्ट्रेसन’का विधा हुन् । त्यसैले कहिले कुन, कहिले कुन बनाउन सकिन्छ नै । पोट्रेट बनाउँदै जाँदा एकपटक कलेजका सरहरूले मलाई तिम्रो आर्टमा क्यारिकेचर पनि मिसाउँदा राम्रो हुन्छ भनेपछि त्यही गर्न थालेँ । क्यारिकेचरमा अनुहारको हाउभाउ, स्वरूप देखिने हुँदा मलाई त पोट्रेट पेन्टिङ नै गरेजस्तो भयो ।
क्यारिकेचरको आकर्षणचाहिँ के हो ?
हेर्ने र बनाउने दुवैका लागि छोटो समय खर्चिए पुग्छ, यसमा । हेर्नासाथै बुझिन्छ । अनि, बनाउन पनि धेरैबेर लाग्दैन । तर, नेपालमा आमरूपमा अझै स्थापित हुन सकेको छैन ।
किन स्थापित हुन सकेन ?
हाम्रोमा क्यारिकेचरको अभ्यास नै भएको छैन । बाहिरतिर स्थलगत रूपमै क्यारिकेचर गर्छन् । कलाकारहरू ‘स्पट’मा गएर त्यहीँ तुरुन्त क्यारिकेचर बनाउँछन् । वर्कसपहरू भइरहन्छन् । बाहिर क्यारिकेचरका म्युजियम नै बनेका छन्, जुन पर्यटकीय गन्तव्यसमेत हुन् । तर, हाम्रोमा यी कुरा छैनन् ।
क्यारिकेचरको बजार कस्तो छ यहाँ ?
बिस्तारै राम्रो बन्दै छ । कलेजमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूसमेत बढिरहेका छन् । तर, यसमा मात्रै निर्भर रहेर जीवन चलाउने अवस्था आइसकेको छैन ।
बजारले विश्वास गर्न नसक्नुको कारण ?
होइन कला, पेन्टिङ किन्ने भनेको दुईवटा अवस्था हुन्छन् । पहिलो कि त यसको ‘क्रेजी’ मानिस नै हुनुपर्‍यो, जो आफ्नो खान्कीको रकम कटाएर भए पनि किन्छ । दोस्रो, हामीलाई आधारभूत कुराको अभाव हुनुभएन । त्यसपछि मात्रै उसले पेन्टिङ किन्नेतिर मन लगाउन सक्छ । यी दुवै अवस्था नेपालमा छैन ।
विदेशमा जस्तै क्यारिकेचरका लागि कलाकारलाई ‘स्पट’मै लैजाने चलन हामीकहाँ छैन ?
त्यस्तो संस्कार हाम्रोमा भित्रिसकेको छैन । बरू, हामीजस्तै कलाकारको संगठन नेपाल कार्टुनिस्ट क्लबले यो प्रतियोगिताका विजेतालाई विदेशमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिन पठाउने गर्छ ।
फोटोसपबाट क्यारिकेचर बनाउन सकिन्न ?
सकिन्छ । तर, यो क्यारिकेचरको सही मार्ग होइन । अनुहार बिगारिदिँदैमा क्यारिकेचर हुँदैन । क्यारिकेचरमा चित्रित विशेषता हेरेर दर्शकले सहजै मानिस चिन्न सक्नुपर्‍यो । हास्य चेत भर्न सक्नुपर्‍यो ।